Ugqugquzela imbokodo onqobile
INJABULO ibibhalwe ebusweni koNkk Fay Ramiah we-Olive Convention Centre, uNkk Deli Ntombela waseKhaya Boutique Hotel noNkk Joanne Hayes wase-Oyster Box. Bonke baphumelele kumaLilizela Awards Isithombe: SITHUNYELWE
BONISWA MOHALE | November 14, 2019
LICHONYWE uphaphe lwegwalagwala ihhotela i-Ekhaya Boutique Hotel eliseWestville, eThekwini, elinqobe emunxeni wokuphatha kahle abantu nokubahlalisa ntofotofo emncintiswaneni kazwelonke amaLilizela Tourism Awards muva nje.
Leli hhotela likleliswe ngezinkanyezi ezine kanti linqobe emumnxeni weService Excellence and Accommodation esigabeni saKwaZulu-Natal ladlulela kuzwelonke nakhona lawashaya emakhanda amanye amahhotela.
UNkk Deli Ntombela, ongumnikazi weKhaya Boutique Hotel, uthe bayajabula kakhulu ngokunqoba ngoba uma bephatha kahle izivakashi basuke bengalindele ukunconywa kodwa basuke benza umsebenzi wabo.
“Ngikholwa wukuthi zonke izipho eziphelele zivela kuMdali. Ngihlale ngilitshela ithimba lami ukuthi lizimisele, lenze abantu bazizwe besekhaya ngoba yibona abasivotelile. Siqale sanqoba KwaZulu-Natal sase sidlulela esigabeni sikazwelonke. Sizizwa sijabule kakhulu ukuthi kumaBoutique Hotel aseNingizimu Afrika yithina esihamba phambili,” kusho uNkk Ntombela.
Uthe ukube ubengenawo umndeni omesekayo ubengeke anqobe lezi zindondo kodwa unomyeni omesekayo kanjalo nezingane zakhe ziyameseka ngokumgqugquzela ukuthi aqhubeke nokusebenza kanzima.
IPHINI likaNgqongqoshe wezokuVakasha uMnuz Fish Mahlalela uthathwe ehalalisela uNkk Deli Ntombela wehhotela Ekhaya Boutique Hotel onqobe emunxeni wokuphatha kahle amakhasimende. Lapha bathathwe noNgqongqoshe wezokuVakasha uNkk Mmamoloko Kubayi-Ngubane Isithombe:TWITTER weLILIZELA
“Umyeni wami akakholelwa ukuthi indawo yowesifazane isekhishini kodwa uyangigqugquzela ukuthi ngenze lokho okungijabulisayo. Izingane zami nazo ziyakuqonda ukuthi ngiwumuntu ozisebenzayo ngakho angikwazi ukuba sekhaya ngaso sonke isikhathi. Yizona ezingitshelayo ukuthi ngingenele imincintiswano nokuthi ngisebenze ngokuzikhandla. Bayangeseka kakhulu nabazali bami bomoya eCovenant Fellowship Church International, abazalwane nomama ongizalayo uhlale engikhulekela,” kusho uNkk Ntombela.
Ekhaya Boutique Hotel yindawo yokuhlala izivakashi enamakamelo ayisishiyagalombili, amane ajwayelekile, amabili angama-deluxe, elilodwa liyi-superior nelilodwa elibizwa nge-executive/honeymoon.
Kuphinde kube nendawo yokwenza izingqungquthela zabantu abangu-60.
Iyenziwa imishado neminye imicimbi.
UNkk Ntombela ungusomabhizinisi onamava emikhakheni ehlukene kwazise unefemu yendwangu iNew Look Textiles.
Ngaphambi kokungena emabhizinisini ubewuthisha iminyaka ewu-12.
Uveze ukuthi ungumuntu owayekuthanda ukuba sebhizinisini kwazise ngisho esafunda amabanga aphansi wayedayisa oswidi esikoleni.
Ngesikhathi ewuthisha uthi wayedayisa imikhiqizo ehlukene.
Ugqugquzele abesifazane ukuthi bangesabi ukungena ebhizinisini kodwa baqale ngokwenza lokho abakuthandayo.
“Angigqugquzeli ukuthi abantu bashiye imisebenzi yabo kodwa ngicela baqale bafune ulwazi lwalokho abafuna ukukuqala. Bangakwenza besebenza bese kuthi uma sebenza inzuzo, bashiye umsebenzi bagxile ebhizinisini. Kubalulekile nokucela ulwazi kwabanye osomabhizinisi. Amadoda ave esebenzisana kahle nathi kufanele sibambane singabantu besifazane sisizane ukuze siphumelele,” kuphetha uNkk Ntombela.